U-DJ Sbu uxoxa ngobuhlungu bokulahlekelwa ngubaba wakhe | News24
U-DJ Sbu uxoxa ngobuhlungu bokulahlekelwa ngubaba wakhe
Johannesburg – U-DJ wakuleli ophinde abe ngusomabhizinisi, uSibusiso Leope (38), nodume kakhulu ngo-DJ Sbu, usazilele ukushona kukababa wakhe oshone emasontweni ambalwa adlule. Lo mbhali wencwadi esihloko sithi Leadership 2020 uthi, “Ubuhlungu bukhona. Kusekusha futhi angazi ukuthi ngibhekane kanjani nakho kodwa ngiyakuqonda ukuthi angisiyena umuntu wokuqala ukubhekana nalokhu, ngakho ngidinga ukuqina, ikakhulukazi ukwenzela umama wami.”
Encwadini ebezwakalisa kuyo imizwa yakhe, ubhale ngokuba umholi kukababa wakhe, isibonelo emphakathini kanye nendoda engasabi lutho. U-DJ Sbu uthi ufuna ukuqhubeka nomlando wakhe njengendlela yokumhlonipha.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: Osaziwayo bakuleli obungazi ukuthi bahlobene
“Uyiqhawe lami. Ubeziqhenya ngempumelelo yami. Ubengumholi emphakathini. Yize noma benginobudlelwano obuhle nobaba wami, ngizizwa sengathi bengingenza okungaphezulu, ngichithe isikhathi esiningi naye futhi ngimbonge kakhulu. Kumele sibabonge abazali bethu kakhudlwana kancane kunalokhu esikwenzayo,” kuqhuba lo DJ, engeza ngokuthi ukuba ubaba wakhe wayengekho empilweni yakhe wayengaba ingane eyihlongandlebe.
Muva nje uDJ Sbu umemezele ukuphuma kwencwadi yakhe yesibili esihloko sithi Billionaires Under Construction. Kule ncwadi ukhuluma ngendlela yokucabanga yomuntu ongumsukunguli wamabhizinisi. “Akusiye wonke umuntu ezinkundleni zokuxhumana owabelana ngobunzima ababhekana nabo ngaphambi kokuba baphumelele noma bavule isifuba ngokuthi baphumelela kanjani. Iningi labantu lingubuze ukuthi kungani ngathatha izinqumo ezithile empilweni futhi le ncwadi iphendula leyo mibuzo,” usho kanjalo.
Lo DJ uthi ukuphokophela phambili kanye nokungadikibali lapho elahliswa ithemba yikhona okube ngukhiye wempumelelo yakhe. “Iningi labantu linamasu amahle kodwa liphosa ithawula uma ngabe izinto seziba nzima. Ukuba ngaphosa ithawula nge-energy drink yami, iMofaya, bengingeke ngibe la ngikhona namhlanje,” usho kanjalo, engeza ngokuthi manje sebedayisa izigidi zalezi ziphuzo ngonyaka.